Hurumende Inoumba Komiti Ichatungamira Kuumbwa kweBumbiro Remitemo Idzva
Kubvumbi 13, 2009
Hurumende yakazivisa kuti yaumba komiti ichatungamira kunyorwa kwebumbiro remitemo yenyika idzva. Komiti iyi, iyo yakaziviswa nemutauriri weparamende, VaLovemore Moyo, ine nhengo makumi maviri neshanu dzine vamiriri vematare ose maviri emunyika, anoti reHouse of Assembly nereSenate.
Nhengo idzi dzakabva kumapato matatu ezvematongerwo enyika, asi mumiriri weTsholotsho, VaJonathan Moyo, havamo mukomiti iyi. VaLovemore Moyo vanoti komiti iyi ichaona kuti bumbiro ranyorwa mukati memwedzi gumi nemisere, sezviri muchibvumirano chakanyoreranwa pasi gore rapera.
VaMoyo vanotiwo vane ruziwo rwevanhu vari kushora hurongwa uhu, uye vanhu ava havafanirwe kushora paramende, asi kuti mapato ezvematongerwo enyika akavandudza bumbiri remitemo, achitsigirwa neSADC.
Masangano ari kupikisa hurongwa uhu anosanganisira NCA, Christian Alliance of Zimbabwe, ZINASU, ZCTU nemamwe.
Asi sangano riri kutungamira kuti munyika muve nebumbiro remitemo idzva rinobva muvanhu, reNCA, rinoti hariwirirane nepfungwa dziri kutsigirwa naVaMoyo pakuumba kwekomiti ine nhengo dzeparamende, sezvo izvi zvichisiya vanhu kunze.
NeMugovera, NCA yakaparura hurongwa hwayo hunonzi “Take Charge” uhwo inoti huchadzidzisa vanhu nezvekuipa kwehurongwa hwekuumba bumbiro remitemo idzva huri kutungamirirwa neparamende.
National Director weNCA, VaEnerst Mudzengi, vaudza Jonga Kandemiiri weStudio 7 kuti hurongwa hwavo hausi kukwikwidzana nehwehurumende kwete.
Hurukuro naVaLovemore Moyo